Chii chinonzi Zvakanaka SEO? Heino Nyaya Yenyaya | Martech Zone
Chii chinonzi Zvakanaka SEO? Heino Nyaya Yenyaya
Chipiri, April 18, 2017 Wednesday, April 19, 2017 Douglas Karr
Pamakore mashoma apfuura, ndave anga chaizvo inzwi nezve vangani vapi vamazano uye vamiririri muindasitiri yekutsvaga indasitiri vanoramba kuchinja. Zvinosuruvarisa sezvavanoramba vachisiya nzira yevatengi vakaisa mari yakawanda asi chaizvo akaparadza kugona kwavo kuwana masimba ehupenyu, chinzvimbo, uye traffic.
Zvakanaka SEO: Nyaya Yekudzidza
Iri rinotevera chati yeimwe yeedu epashure makasitoma 'keyword masosi ekufamba kwenguva uchishandisa Semrush:
A - Uku ndiko kuvhurwa kwewebhusaiti yemutengi pasi peiyo yapfuura agency. Yaive iri nyowani nyowani domaini isina masimba
B - Mushure menguva yekusave nekukura, iyo agency yakasarudza kubvarura yechinyakare zano rekugadzira akawanda madomaini, otomatiki huwandu hwehuwandu hwakawanda hwemukati kiyi-kiyi-rakapfuma mapeji, uye ine hukasha backlinking.
C - Iyo saiti yakakwira zvakanyanya mumatanho uye organic organic; zvisinei, hazvina kutora nguva kuti Google algorithms ikanganise iyo backlinking scheme uye kudonhedza saiti yacho kune yayo yapfuura isiri-masimba.
D - Sangano rakadzingwa uye isu takapihwa basa rekutora saiti uye yekutsvaga kwekutsvaga chinzvimbo. Kwemwedzi mitanhatu inotevera, takavakisa saiti iyi, takabvisa backlinks ine chepfu, takadzoreredza matunhu ese kunzvimbo imwechete, takadzorera huwandu hwemapeji akakosha kuenda pakati, mapeji ehurukuro imwe chete, akaburitsa zvakapfuma, uye infographic. Takatevera zero backlinking isina kubhadharwa kukwidziridzwa chero chii zvacho. Hapana. Nada.
E - Mhedzisiro yacho inoenderera ichityaira kugovana, kubatanidzwa, uye shanduko. Pamusoro pekukwirira kwematanho pakati pegore rapfuura uye gore rino, zvikamu zviri kumusoro 210%, vashandisi vakwira 291%, kutariswa kwemapeji kuri kumusoro 165%, bounce rate iri pasi 16%, zvikamu zvitsva zviri 32%, kudzoka kwevashanyi kwakakwira 322% . Uyu mutengi anoshandisa mafoni kufonera bhizinesi, saka hatina chaiyo yekushandura dhata kunze kwekufona kwetsva uko kwavakabvunzwa kuti vakawanikwa sei. Google inoenderera ichitungamira nzira.
Ini ndinoramba ndichinyevera makambani anotsvaga vanachipangamazano ekutsvaga vasina kumbotsvagurudza vateereri, makwikwi, kana maitiro avo pasiti. Backlinking isina kugadzirwa kwakakodzera, kwakakosha, uye kwakanyanya-kwakakwenenzverwa midhiya midhiya kuri kuzokupinza mumatambudziko. Isu tinoramba tichityaira vatengi vedu organic mhedzisiro kuburikidza akawana chiremera pane simba zvinoshandiswa kana kubhadharwa.
Kudzidza kwakadzika uye huchenjeri hwekugadzira hunoramba huchityaira Google's Rankbrain algorithm. Larry Kim akadaro:
Google ichaenderera mberi nekuongorora peji rako kuti uwane mibvunzo yakakodzera… kwenguva yakati. Asi kana ikakundikana kukwezva kubatanidzwa, inoramba ichifa kufa kunononoka. Inogona kurasikirwa ne3 muzana yetraffic pamwedzi - saka diki hautombozviona kusvika zvanyanyisa. Pakupedzisira, peji rako rinongodonha kubva mukukakavara kwepamusoro.
Kusvika nguva yakwana.
Mazuva ano marongero ekutsvagisa organic haadi nezuro kutsvaga vanachipangamazano. Mazuva ano marongero ekutsvaga ehupenyu anoda hukuru hwevashambadziri uye vezvinhu vatengesi vanonzwisisa maitiro ekutsvagisa uye kugadzirisa ako edhijitari kuyedza kune vateereri vako wobva wavapa nzira dzakagadziriswa dzekutendeuka.
Kana wako wekutsvaga wekutsvagisa asiri kugara achitsvaga, achipa zvekuisa pane ako marongero marongero, uye kugadzirisa yako saiti, inguva yekutsvaga mutsva wekutsvaga wekushamwaridzana naye. Muchokwadi, isu tinoda kubatsira kubatsira - kunyanya kana iwe uri muparidzi mukuru kwazvo. Chiitiko chedu ipapo hachienzanisike muindasitiri.
Tags: yakaipa seoyakanaka seokeyword chepamusoroorganic searchOrganic tsvaga zvikamu zvitsvaorganic yekutsvaga peji kuonaOrganic yekutsvaga zvikamuvashandisi vekutsvagachepamusorosemrushchii chakanaka seo